ရေပေါ်မှာ oatmeal - multivarka အတွက် oatmeal များအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများတစ်မိုက်ခရိုဝေ့, ဘဏ်
ရေပေါ်မှာ oatmeal - ရိုးရှင်းတဲ့ဟင်းအရသာရှိတဲ့လုပ်ဖို့ဘယ်လို?
ရေပေါ်မှာ oatmeal နံနက်စာများအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တစ်ဦး, မျှမျှတတအသုံးဝင်သောကျန်းမာအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ချက်ပြုတ်နည်းလမ်းကုထုံးနှင့်အစားအသောက်အာဟာရများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရာကယ်လိုရီသီးနှံအကြိမ်ပေါင်းများစွာ, လျော့နည်းစေသည်။ , အစားအစာများ၏အနံ့အရသာအမျိုးမျိုးသီး, အသီးနှင့်အခွံမာသီးထည့်သွင်းခြင်းလတ်ဆတ်တဲ့, texture နှင့်အရသာပေးပါ။
ရေ၌ oatmeal ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရေပေါ်မှာ oatmeal - ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာချက်ပြုတ်နိုင်မယ့်ပန်းကန်။ မူလစာမျက်နှာ - ထိုကိုက်ညီမှုဆုံးဖြတ်ရန်:31 ခွက် oatmeal မှရေအရည်ဖန်များအတွက်အသုံးပြုသည်2ပျမ်းမျှအချိုးအစားများကို: 1, အလွန်ထူသောအဘို့အလွှာများနှင့်အရည်တစ်ဦးတန်းတူပမာဏကိုကြာပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုသူ့ဟာသူရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: oatmeal 15 မိနစ်ဆားရေပွက်ပွက်ဆူနေသောထဲမှာချက်ပြုတ်နေသည်။
oat အလွှာ "Hercules" - 180 ဂရမ်;
ရေ - 360 ml ကို;
ဆား -5ဂရမ်
ထို့နောက်အပူကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်နှိုးဆော်, 10 မိနစ်ချက်ပြုတ်။
ရေထဲမှာအရသာ oatmeal ်ထမ်းဆောင်မတိုင်မီ5မိနစ်အဘို့အရပ်သင့်ပါတယ်။
နို့နှင့်ရေနှင့် oatmeal ၏စာရွက်, သင်ကအရသာနှင့်ကျန်းမာမနက်စာအတူအသစ်တခုသောနေ့ရက်ကိုစတင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်တင်းကျပ်သောအစားအစာလိုက်နာကြဘူးသောသူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်ကားချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာနှင့်အာဟာရမုန့်ညက်ရဖို့လိုသည်။ အမြန်မျှမျှတတမုန့်ညက်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ပေါင်းဖြစ်သည့်ပဲ 10 မိနစ်, ထိုသို့ပြင်ဆင်နေသည်။
oat အလွှာ - 230 ဂရမ်
သကြား - 30 ဂရမ်,
ထောပတ် - 50 ဂရမ်
, ဆား, သကြားနှင့်အတူရာသီပြုတ်ဖို့အရောအနှောကိုယူခဲ့။
, Oats အတွက်နှိုးဆော်အပူနှင့်မျှတည်ထားပါလျှော့ချ, ရံဖန်ရံခါ5မိနစ်နှိုးဆော်။
oatmeal ရေနှင့်နို့ အဖုံး5မိနစ်အောက်မှာထုံမွှန်း, ထောပတ်နှင့်အတူဝတ်ဆင်နှင့်စားပွဲ၌ဝတ်ပြုကြ၏။
သင်ကအတွက်စပျစ်သီးပျဉ် add လျှင်သကြားမပါဘဲရေပေါ်မှာ oatmeal, မွှေးသွားပင်ပါ။ သူကသဘာဝဂလူးကို့စနှင့် fructose ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်နှင့်အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ၏ပန်းကန်အရေအတွက်ကကြွယ်ဝစေအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရွက်၏ပိုင်ထိုက်သောနှစ်ဦးစလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုလူအပေါင်းတို့သည်တန်ဖိုးရှိသောတ္ထုများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, oatmeal ချက်ပြုတ်မဟုတ်ကြောင်း, သို့သော်စပျစ်သီးပျဉ်၏ uzvar အတွက် zaparivat ။
oat အလွှာ - 50 ဂရမ်,
ဒိန်ခဲ - 50 ဂရမ်,
ရေ - 280 ml ကို။
အဆိုပါဆေးကြောစပျစ်သီးပျဉ်5မိနစ်အဘို့ရေနှင့်အနာစိမ်းနှင့်အတူဖြည့်ပါ။ အပူထဲကနေဖယ်ရှားပါ။
အဆိုပါ oatmeal ထည့်ပါ။
oatmeal ဂျုံယာဂုရေအဖုံး 10 မိနစ် zaparivat ။
ပန်းသီးနှင့်အတူ oatmeal ရေ
ပန်းသီးနှင့်အတူရေပေါ်မှာ oatmeal နာရီဝက်ဖြုန်းဖို့တစ်ဦးသည်မသနားဖြစ်သည့် "သွယ်" နှင့်တစ်အရသာနံနက်စာ၏ပုံစံကိုရည်ညွှန်းသည်။ ပန်းသီးကောင်းစွာသစ်ကြံပိုးနှင့်လေးညှင်းပွင့နှင့်အတူ caramelized, လတ်ဆတ်အရသာထပ်ထည့်နိုင်မဆိုလမ်းထဲမှာရှိပါတယ် - ပြီးပြည့်စုံဟင်းပါစေ။ ချက်ပြုတ်၏ဤနည်းလမ်းနှင့်အတူသူတို့အလွန်အရည်ရွှမ်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ထောပတ် pudding add ကြပါဘူး။
oat အလွှာ - 100 ဂရမ်;
သကြား - 20 ဂရမ်,
သစ်ကြံပိုး -5ဂရမ်,
လေးညှင်းပွင့ -3PCs; ။
ပန်းသီး - 1 pc; ။
ရေ - 450 ml ကို။
Apple ကခွံကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်သို့နှင့်ရေပူ၏ 50 mL နှင့်အတူဖြည့်ပါ။
သကြား, လေးညှင်းပွင့, သစ်ကြံပိုး Add နုပန်းသီးနှင့်အရည်၏ရေငွေ့ပျံသည်အထိချက်ပြုတ်။
အလွှာဆူရေနှင့်အနာစိမ်းအတွက် vsypte ။
oatmeal စပ် caramel ပန်းသီးနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောပြီးနောက်မိနစ် 20 များအတွက်ရေထဲမှာပြုတ်။
ငှက်ပျောသီးနှင့်အတူရေပေါ်မှာ oatmeal ကျန်းမာနံနက်စာတစ်စီးရီးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီစာရွက် - နံနက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုပိုနှစ်သက်သူကိုအားကစားသမားများအတွက်ရှာဖွေတာ။ အဆိုပါပန်းကန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်နှေးကွေးသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်တစ်ထောက်ပံ့ရေးပါရှိသည်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာစတေဲ့။ ဤသည်ဂျုံယာဂုလုံးစပါးကိုစီရီရယ်အနေဖြင့်ချက်ပြုတ်ထားရမည်, သို့သော်အစာရှောင်ခြင်းအစာကိုအလွှာရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
ငှက်ပျောသီး - 1 pc; ။
ဘရောင်းသကြား - 30 ဂရမ်,
သစ်ကြံပိုး - အဖြစ်တော့;
oat အလွှာ - 50 ဂရမ်
ရေ vsypte oat အလွှာဆူ၌တည်၏။
15 မိနစ်ဘို့ရေကိုပြုတ် oatmeal ၏ဂျုံယာဂု။
နှိုးဆော်, caramel စောင့်ဆိုင်းနှင့်ချောဂျုံယာဂုထားပါ။
ပျားရည်နှင့်အတူ oatmeal ရေ
သကြားပျားရည်နှင့်အစားထိုးနေသည်ဆိုပါကရေပေါ်မှာချိုမြိန်ဂျုံယာဂု, ဗီတာမင်ပန်းကန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အခြားအဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်မတူဘဲ, ဂျုံယာဂုများ၏စွမ်းအင်တန်ဖိုးကိုအပေါ်ပျားရည်မှုမရှိခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသုံးပါနှင့်၎င်း၏ကယ်လိုရီ content တွေကိုတိုးမြှင့်။ ပျားရည်ရဲ့အကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်ပြုလုပ်ကုသနှင့်ပြီးသားချက်ပြုတ် oatmeal မှဆက်ပြောသည်အပူမပေးပါ။
oat အလွှာ - 90 ဂရမ်,
ရေ - 480 ml ကို;
ဆားရေ vsypte အလွှာဆူ၌တည်၏။
Cook က 15 မိနစ် porridge ။
, အပူမှဖယ်ရှားရန်အဖုံးကိုအနည်းဆုံး5မိနစ်များအတွက်ပန်းကန်ထားခဲ့ပါ။
ရေပေါ်မှာပျားရည် oatmeal ဂျုံယာဂုကိုချက်ချင်းစားပွဲမှထောက်ပံ့နေသည်။
အခြောက်လှန်းအသီးနှင့်အတူ oatmeal ရေရိုးရာအမြင်ပြောင်းလဲနှင့်အသစ်အရသာတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုနှစ်သက်နိုင်ပါ။ အခြောက်လှန်းအသီးနှင့်အတူဂျုံယာဂုသာမွှေးကြိုင်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်လည်းငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၏ခံစားချက်များကိုသက်သာရာခြင်းဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်အလွန်အမင်းအာဟာရထုတ်ကုန်သို့လှည့်။ ပိုပြီးအရည်ရွှမ်းမွှေးအဆင်သင့်ဂျုံယာဂုဘို့မီးဖို၌ သာ. မိနစ်အနည်းငယ် tantalized ။
oat အလွှာ - 150 ဂရမ်;
တံစဉ်များကို - 90 ဂရမ်,
apricots - 60 ဂရမ်,
ရေ - 550 ml ကို;
သကြား - 20 ဂရမ်
ပူနွေးသောရေ၌သုတ်သင်နှင့်သွေ့ခြောက် apricots စုပ်ယူထားသည်။
oatmeal ၌ရေလောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားဆူများတွင်သကြားထည့်သွင်းခြင်းနှင့် 15 မိနစ်ချက်ပြုတ်။
, ထိုရေထု၏အခြောက်လှန်းအသီး Remove ထွက် wring နှင့် Cube သို့ခုတ်ဖြတ်။
oatmeal မှထောပတ်သူတို့နှင့်အတူအတူတကွ Add ပြီးကောင်းမွန်စွာရောမွှေပါ။
130 ဒီဂရီမှာမီးဖို၌နွေးဂျုံယာဂု7မိနစ်။
ပျင်းရိ oatmeal ဘဏ် ရေ - အားသာချက်များတဲ့အရေအတွက်ကဘဲတစ်လောကလုံးဟင်း။ ထိုသို့အိမ်ကနေအဆင်ပြေဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ကြောင့်အလုံပိတ်ကွန်တိန်နာအတွက်ပြင်ဆင်မှုရန်, ဂျုံယာဂုအရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်တို့နှင့်အတူအယူ, ဒါပေမယ့်နိုင်သည် - စာရွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသစ်အရသာပေါင်းစပ်ဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်အောင်။ ဂျုံယာဂုရှည်လျားအခိုင်အမာဒါကြောင့်ညဦးယံ၌ဒါကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ပျော့ oat အလွှာ - 50 ဂရမ်,
မြေပြင်ပိုက်ဆန်မျိုးစပါး - 20 ဂရမ်,
လိမ္မော်ရောင် - 1/2 PCs ။
ပိုက်ဆန်မျိုးစပါးနှင့်အတူ oatmeal ရောမွှေပါ။
400 ml ကိုတစ်အိုးထဲသို့အရောအနှောကိုလောင်း။
oatmeal ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းပျင်းရိရေမှာအနည်းဆုံး6နာရီထုံမွှန်း။
oatmeal သံလိုက်လှိုင်းများ ရိုးရှင်းများနှင့်လွယ်ကူခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရေပေါ်မှာ။ ဒီထုံးစံ၌ပွငျဆငျဖို့ကောင်းတစ်ဦးပန်းကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကနှိုးဆော်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, "ပြေး" နှင့်မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာထားရန်လိုအပ်ကြောင်း, အများဆုံးပါဝါ setting များနှင့်7မိနစ်5ကနေအချိန်ကိုရွေးပါမထားဘူး။ တစ်ဦးအဆင်သင့်နှင့်အတူ seasoned ဂျုံယာဂု, ပိုလျှံရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။
ဆား -5ဂရမ်,
မြေပြင်ငရုတ်ကောင်း - တစ်ဦးဖြစ်တော့။
အဆိုပါမိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုတဖို၌အထူးကွန်တိန်နာထဲမှာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အများဆုံးအာဏာမှာ7မိနစ်ချက်ပြုတ်။
multivarka ရေထဲမှာ oatmeal
oatmeal ရေပေါ်မှာ multivarka အတွက်ဂျုံယာဂု - ကျန်းမာနံနက်စာရဖို့တစ်ဦးအဆင်ပြေနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဂျုံယာဂုအဘို့အ multvarke အတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့မလိုအပ်ပါကကြေညက်သည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်မီးရှို့ကြလိမ့်မည်နှင့်ဆိုပါကရှေ့တော်၌ထိုညဉ့်ပါဝင်ပစ္စည်းများတင်သောနှငျ့ "နှောင့်နှေးစတင်" ထား, နံနက်အားရစရာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ဂျုံယာဂုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောနူးညံ့ကြင်နာမှုရန်,a"ကိုအပူ" ၌ပေါင်း, ရေနံနှင့်အတူဖြည့်ဖို့လိုအပျပါ။
ရေ - 400 ml ကို;
ထောပတ်နှင့်အတူ Multivarki ပန်းကန်ဖြီး။
20 မိနစ် "ဂျုံယာဂု" mode ကိုဖွင့်ထားပါ။
, အဖုံးကိုဖွင့်သည့်ထောပတ်ထည့်5မိနစ်များအတွက် mode ကို "အပူ" လှည့်။
ပန်းဂေါ်ဖီသုပ် - စာရွက်
ရွှေဖရုံသီး caviar ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တစ်ဦး creamy ငံပြာရည်အတွက်ပုစွန်
အဆိုပါ pollack ကြော်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖရဲသီး peels ၏ယိုချက်ပြုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို - စာရွက်
ခေတ်သစ်ဗားရှင်း - ရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ် Decorating
Ed Sheeran ငယ် Admiral ကုသမှုများအတွက်ပိုက်ဆံမြှင့်ကူညီအားမိမိဂစ်တာကိုပေး၏
Sagittarius နှင့် Sagittarius - ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်လိုက်ဖက်မှု
ဧည့်ခန်းထဲမှာ drywall ၏ niche
ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အတူ Gazpacho ဟင်းချို - စာရွက်
ကြက်ဆင်၏ဆောင်လည်ဆွဲကလေးကို - ချက်ပြုတ်နည်း
မိန်းမတို့အဘို့ Dandy စတိုင်
Artichokes - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး